म्यानपावरको बदमासी – अग्रिम अशुल्ने, बिभागलाई नटेर्ने ! – Yuwa Aawaj
म्यानपावरको बदमासी – अग्रिम अशुल्ने, बिभागलाई नटेर्ने !
बैसाख ७, २०७८ मंगलबार 615
काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगारको क्रममा माल्टा पठाईदिन्छु भनि २०७५ मा बसुन्धारा स्थित क्यापि’टल रि’क्रुटमेन्ट सर्भिसका संचालक टंकप्रसाद सुबेदीले एक युवासँग अ’ग्रिम अशुली गरे ।
माल्टा जान पाइने आशामा बाराका सुमन लामाले नविल बैंक मार्फत संचालक सुवेदीको खातामा दुई लाख डिपो’जिट गरिदिए । पासपोर्ट पनि दिए । तर संचालक सुवेदीले लामालाई माल्टा पठाएनन् । बरु लामो समयदेखि पैसा फिर्ता दिने भन्दै झु’लाईरहे ।
पिडित लामाका अनुसार उनिजस्तै धेरै युवाहरुलाई सुवेदीले यसरीनै झुला’ईरहेका छन् । त्यसो त सुवेदी संचालक रहेको बसुन्धरा स्थित क्यापिटल रिक्रु’टमेन्ट म्यानपावर अहिले पनि वैदेशिक रोजगार बिभागको कारवाहीको सूचीमै छ । बिभागले पि’डितहरुको उजुरीको आधारमा म्यानपावरका कारोबार रोक्का गर्ने गर्छ ।
बिभागले म्यानपावर रोक्का राखेपनि म्यानपावरलाई देखाएर व्यक्तिगत तरिकाले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काम गरिरहेको आशंका गरिएको छ ।
माल्टा जान पाइने आशामा २०७५ देखि दुई लाख बुझाएर बसेका पिडि’त लामाले पैसा फिर्ता नपाएपछि झन्डै २ बर्ष पछि वैदेशिक रोजगार बिभागमा उजुरी दिन पुगे । उजुरी दिन पुगेका पि’डितको उ’जुरीको आधारमा बिभागका एक अधिकारीले पटक-पटक म्यानपावरको नाममा तीन दिने, २४ घन्टे र ७ दिने पत्र पठाए पनि म्यानपावरले बिभागलाई टेरेन ।
पि’डित भन्छन् ‘म आफ्नो पैसा फि’र्ता पाउँछु कि भन्ने आशामा बिभाग गईरहन्थें । पछि केहि पार नलागेपछि बिभागमा महानिर्देशक सर कुमार प्रसाद दहालकहाँ गएर आफ्नो समस्या राखें । उहाँको पहल पछि मात्र एक लाख रकम फि’र्ता पाएँ । त्यसपछि झन्डै एक महिना पछि थप ८० हजार फि’र्ता पाएँ ।’
यो समाचार तयार पार्दै गर्दा बिभागमै रहेका पि’डतको गु’नाशो छ- ‘दुई बर्षको ब्याज र मैले वैदेशिक रोजगारको आशामा कुरेको समयको त हिसाव रहेन । अझै बाँकी २० हजार पैसा पाउने आशामा फेरी बिभाग आईपुगेको छु ।’
पि’डितका अनुसार बिभागमा पुग्दा म्यानपावर गएर पैसा लिनु भन्ने अनि म्यानपावरमा पुग्दा जे कुरा हो बिभागमै हुन्छ भनेर झुला’ईरहिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार इजाज’तप्राप्त म्यानपावरले व्यक्तिगत श्रम स्वी’कृतिमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन पाइदैन ।
यसरी काम गरेको प्रमाणित भए म्यानपावरको इजजात खारेजसम्मको कारवाही हुन्छ । तर नीति बिपरित अग्रि’म अशुली र लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेको प्रमाण सहित पटक-पटक उ’जुरी दिन पुग्दा समस्याको समाधान हुन सकेको छैन ।
नीति अनुसार अ’शुली गरेर विदेश पठाउन नसके बिभागले पि’डितलाई जति पैसा उठाएको हो त्यसमा थप ५० प्रतिशत जरिवाना समेत थपेर पिडितलाई भराईदिने व्यवस्था छ । सम्बन्धित म्यानपावरका संचालकले इजाजत पाएको म्यानपावरलाई देखाएर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा अहिले पनि कयौं युवाहरुलाई प्रलोभनमा पारेर पैसा उठाईरहेको पीडतले बताएका छन् । -साझा सबाल
Prevप्रकाश सुबेदीका दुवै कार्यक्रम निल’म्बनमा ।
Nextनारायणगढ-मुग्लिन खण्डमा २६५ मिटर दूरी छोटियो
बाजुराको दुर्गम गाउँमा गएर सेवा दिँदै डा. जस्मीता…उनलाई उच्च सम्मान छ ।
छाती किन दुख्छ ? छाती दुख्ने समस्यामा प्रयोगहुने घरायसी औषधि यस्ता छन्, जानीराख्नुहोस ।